कलेज | Makalukhabar.com
अस्ट्रेलियाको एआइबिटी इन्टरनेशनल कलेज पुनः सुचारु हुने
जेठ २२, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको एआइबिटी इन्टरनेशनल कलेज पुनः सुचारु हुने भएको छ । अस्ट्रेलियन स्कील क्वालिटी एथोरोटी (आस्क्वा)ले कलेजको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई त्यहाँको अदालतले बदर गरिदिएपछि कलेजले पुनःपठनपाठन सुरु गर्ने भएको हो । हजारौ विद्यार्थीको करियर अन्यौल पार्ने... जारी राख्नुहोस...
अब एक विद्यार्थी एक छात्रबृत्ति मात्र
जेठ १५, काठमाडौं । शिक्षा तर्फ आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ । विद्यालय भर्ना भइ नियमित अध्ययन गर्न नसक्नेलाई अनौपचारिक शिक्षा तथा खुल्ला विद्यालय सञ्चालनको ब्यवस्था गरिनेछ । ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर गराईनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शैक्षिक... जारी राख्नुहोस...
प्रदेश १ मा सिम्याटको अभिमुखीकरण सम्पन्न
जेठ ३, विराटनगर । प्रदेश १ कै पहिलो र सर्वोत्कृष्ट सिम्याट पढाई हुने ईन्स्टिच्युट एडुमार्क प्रा. लि. बिराटनगर ले सिम्याट को अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ । प्लस २ पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्न्तगत व्यस्थापन संकाय मा स्नातक पढ्न प्रतिस्पर्धा गरेर भर्ना हुनलाई लिने सिम्याटको अभिमुखीकरणमा ८७ जना विद्या... जारी राख्नुहोस...
भारतको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल विश्वविद्यालयले विशेष छात्रावृत्ति दिने घोषणा
बैशाख, २९, काठमाडौं । भारतको चन्दीगढ रोड हरियाणामा रहेको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल युनिभर्सिटीले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विशेष छात्रावृत्ति दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । स्थापनाको पहिलो वर्षमै विश्विद्यालयले विद्यार्थीहरु... जारी राख्नुहोस...